China Leather Keychains & Key Fobs ifektri abakhiqizi | SJJ
Izinto zokukhangisa zikanokusho. Izitayela ezingaphezu kwezingama-40 zokhiye wesikhumba we-Fob shape nezitayela ezingama-80 zesikhiye esingukhiye esingakhetha, akukho nkokhiso yesikhunta. I-logo ingaba i-laser kusimbi noma ukuphrinta, i-laser, elahliwe esikhunjeni.
Ama-Fobs Esikhiye Esikhumba / Okhiye Bezikhumba
Sine izitayela ezingaphezu kuka-40 ukhiye lesikhumba Fob ukuma angakhetha. Ungabi nenkokhelo yesikhunta. Ungangeza i-1pc metal charm ne-logo yakho kuyo. I-FOB key yesikhumba ingenza isiteshi samaphoyisa. Faka ilogo yesiteshi samaphoyisa enikezwe iphoyisa. Futhi sinezitayela ezingaphezu kwezingama-80 zezikhiye zesikhumba ongazikhetha. Ilogo can laser ensimbi, ingaphrinta esikhunjeni. Laser esikhunjeni. I-logo elahlekile esikhunjeni. Hlanganisa insimbi nesikhumba, kubukeka sengathi kusezingeni eliphezulu kakhulu. Okwezimoto eziningi ukukhushulwa komkhiqizo. I-Leather keychain izinto zokuphromotha okunethezeka.
Izinto: Isikhumba sangempela / se-PU
Isikhunta: Ukukhokhiswa kokuma kwamahhala kobukhulu nobukhulu obukhona
Izinto: Ithusi, ithusi, insimbi, i-aluminium, insimbi engagqwali, i-zinc alloy, i-pewter
Inqubo ye-logo: I-die ishayiwe, isithombe sagxila, saphrintwa, sakaza i-casting, i-spin thusi
Umbala: Koqweqwe lwawo oluqinile, ukulingisa koqweqwe lwawo oluqinile, koqweqwe lwawo oluthambile
Usayizi wesakhiwo nokuklama: Kwenziwe ngentando
Langaphambilini Iziphathi Zesiphuzo se-Neoprene
Olandelayo: Izesekeli zensimbi
China Best Isikhumba Keychains
I-China Abathengi Abakhulu Bezikhumba Abahlinzeki
Intengo yeChina Leather Keychain ne-PU Keychain
umnikazi wekhadi lebhizinisi lesikhumba
Ama-Fobs Esikhiye Esikhumba
Izikhiye ZamaKhiye Womkhiqizo Wezimoto
Ama-Keychains we-Neoprene Chapstick Holder